र्‍यापिड टेस्टमा पोजेटिभ देखिएकी युवतीको मृत्यु !
ब्लड क्यान्सरको बिरामी भएकाले कोरोना मृत्युको कारण नभएको दाबी !
वीरगञ्ज । र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी पोजेटिभ देखिएकी एक युवतीको ज्यानै गएको छ । वीरगञ्ज १० अशोक बाटिका बस्ने २३ वर्षीया युवतीको ज्यान गएको हो । तर उनको पिसिआर रिर्पोट आउन भने बाँकी थियो ।
उनलाई आइसोलेसनमा राख्ने तयारी गर्दागर्दै मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. मदन उपाध्यायले जानकारी दिए । तर उनी पहिलेदेखि नै ब्लड क्यान्सरको बिरामी भएकाले कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको भन्न नसकिने डाक्टरको दाबी छ ।
उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि ०७६ चैत ५ गते चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा लगिएको थियो । अस्पतालमा जाँचपछि ब्लड क्यान्सर भएको प्रमाणित गर्दै प्रारम्भिक उपचारपछि चैत ९ गते डिस्चार्ज गरिएको थियो । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन गर्‍यो ।
त्यसपछि शनिबार राति १० बजेतिर उनलाई तराई हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा भर्ना गरियो । अस्पतालले अन्य जाँचसँगै आरडीटी परीक्षण गर्दा शंकास्पद रिपोर्ट आएपछि नारायणी अस्पतालको टोलीले फेरि पनि र्‍यापिड टेस्ट गरेको थियो । त्यसक्रममा एन्टिबडी पोजेटिभ देखिएपछि नारायणी अस्पतालमा आईसोलेसनमा राख्न लगिएको थियो । उनको सोही अस्पतालमा शनिबार मृत्यु भएको हो ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, बैशाख १४, २०७७, १२:२४:५९